Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru » Ala ọma jijiji M6.1 siri ike na mpaghara ókèala Peru-Ecuador
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N'ebe ndị ahụ, ala ọma jijiji mere na enwere ike imebi ụlọ na akụrụngwa ndị ọzọ.
Ala ọma jijiji ahụ mere na nso Sullana.
Ala ọma jijiji a mere na Peru na Ecuador
Enwebeghị akụkọ ọnwụ ma ọ bụ mbibi dị.
Ala ọma jijiji siri ike 6.1 mere na nso Sullana, Provincia de Sullana, Piura na Peru.
Ala ọma jijiji ahụ mere na omimi miri emi nke 10 kilomita n'okpuru ebe ntụpọ ahụ dị nso na Sullana, Provincia de Sullana, Piura, Peru, n'etiti ehihie na Fraịde 30 Julaị 2021 n'elekere 12:10 nke abalị. Ala ọma jijiji na -emighị emi na -enwe mmetụta siri ike karịa nke miri emi ka ha na -abịaru nso. Enwere ike degharịa oke oke, ebe etiti na omimi nke ala ọma jijiji ahụ n'ime awa ma ọ bụ nkeji ole na ole sochirinụ ka ndị na -ahụ maka mmiri seismologists na -enyocha data wee nụchaa mgbako ha.
Nkwupụta abụọ nke German Research Center for Geosciences (GFZ) na European-Mediterranean Seismological Center (EMSC) wepụtara depụtara ala ọma jijiji ahụ dị ka 6.1.
Dabere na data mbido seismic nke mbụ, onye ọ bụla nọ na mpaghara ebe ntụpọ ahụ kwesịrị inwe mmetụta. N'ebe ndị ahụ, ala ọma jijiji mere na enwere ike imebi ụlọ na akụrụngwa ndị ọzọ.
Ịma jijiji dị nta mere na Sullana (pop. 160,800) nke dị kilomita 15 site na mpaghara etiti, Querecotillo (pop. 25,400) kilomita 16, Marcavelica (pop. 25,600) kilomita 18, Tambo Grande (pop. 30,000) kilomita 24, Piura (pop. 325,500) kilomita 28, San Martin (pop. 130,000) kilomita 29, Catacaos (pop. 57,300) 38 kilomita, na Chulucanas (pop. 68,800) dị kilomita 47.
Ndị otu Selo Group na Chef Meyrick a ma ama…
Otu Ascott Sun: Mmekọrịta Ọhụrụ - yana gịnị ...
Onye isi ala Tanzania na -ahazigharị aha njem nlegharị anya sara mbara ...